I-Raglan LoveNest -Ukushaywa wumoya okunobhavu wangaphandle - I-Airbnb
I-Raglan LoveNest -Ukushaywa wumoya okunobhavu wangaphandle
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Guillaume And Tara
Zizwa ungaphandle kwegridi uhlala kulokhu kuphunyuka okuyimfihlo nje okungamakhilomitha angama-4 ukusuka eWhale Bay, kanye no-12kms ukusuka eRaglan. Ikotishi elincane lothando liphezulu endaweni yethu engamahektare angama-35, libheke phezulu eziqongweni zezihlahla ngasogwini. Gcoba embhedeni omkhulu othokomele, futhi ube nebhavu elishisayo emphemeni. Leli khabethe elihle linakho konke okudingayo ukuze uhambe ukhululeke. Ukuphunyuka kwansuku zonke. Ilungele yo, abantu abafuna ukunqamula futhi babuyele emvelweni
Jabulela uhambo olulula, olunothando nomuntu okhethekile empilweni yakho kule ndawo ekhetheke kakhulu.
I-LoveNest Cottage ibekwe phezulu endaweni yethu engamahektare angama-35 futhi inokubukwa okukhulu, okunwetshiwe phezu kweziqongo zezihlahla, kanye nokulunguza kogu nolwandle. Izungezwe izihlahla zomdabu nezihlahla zikaphayini, kanye nempilo yezinyoni eziningi. Okwabathandanayo abasebasha (enhliziyweni), kanye nezinhlobo ezifunayo ezifuna ulwazi olukhethekile, hhayi nje indawo yokuhlala.
SICELA UFUNDE LENCAZELO NGOKUGCWELE NGAPHAMBI KOKUBKHA.
•Ikhishi elincane, elihlome ngokuphelele elinosinki kanye netop yokupheka yegesi.
•Indawo yokudlela enamakhandlela ezidlo zakusihlwa zothando
•Umbhede/usofa olingana nendlovukazi wokuzitika ngelineni lombhede kanokusho ukuze ulale kahle ebusuku. Sibeka ama-duvethi amabili embhedeni ebusika ukuze kufudumele futhi kuthokomele.
•Izibani eziningi ze-LED ezisebenza ngelanga, kanye ne-heater yegesi ebusuku obubandayo (sicela uqaphele ukuthi indlu encane ivalekile).
•Umgqomo obandayo (Cool Stool) okusiza ukuthi ugcine ukudla kwakho neziphuzo kubanda.
•Indlu yokugezela encane, ehlanzekile eneshawa eshisayo nendlu yangasese isendlini ehlukene exhunywe ngaphansi kophahla olufanayo.
•I-double deck enkulu ephumela ehlathini likaphayini, enebhavu elishisayo, itafula elincane, nezihlalo zedekhi, yokudlela nokuphumula.
•I-BBQ yokupheka ngaphandle.
•Ikhofi eliphilayo le-Morning Glory, itiye, ubisi oluyimpuphu noshukela, namafutha omnqumo
•Yonke ilineni yombhede, amathawula, izindwangu zezitsha, nemikhiqizo yokuhlanza.
•I-Ecostore Shampoo, i-conditioner, ukugeza umzimba nokugeza izandla
•Amakhandlela, omagazini nezincwadi.
•Fafaza izimbungulu ukuze ugweme izimbungulu.
•I-detox evela kubuchwepheshe, uma ukhetha, ayikho ikhava yeselula endlini encane (ungaxhuma ku-WIFI kwezinye izindawo ukusuka kuleyo ndawo).
•Isipika se-Bluetooth se-UE sokulalela izingoma zakho ezilandiwe.
Bheka Izinto Ezinhle Okufanele Uzenze E-Raglan ku-Tiny Houses Raglan.
Uma i-LoveNest ingatholakali ngezinsuku ozifunayo:
Noma hlola okunye ukufakwa kuhlu kwethu endaweni efanayo, i-raglantreehouse kanye ne-raglanlovebus
Kunezinto eziningi ezijabulisayo ongazenza ngenkathi unathi futhi sikushiyele imibono embalwa endlini encane. Enye yalezi zinto ihlathi/umfudlana omuhle (endaweni yethu) phansi ubheke eweni/ulwandle, ukuya esihlahleni esikhulukazi esidala sePuriri lapho ungathola khona ipikiniki. Uzohamba ensimini, bese udabula ehlathini lendabuko futhi wehlele emfudlaneni, udlule impophoma bese uya esihlahleni sePhikhinikhi. Uhambo luzokuthatha imizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20 ukuya lapho futhi izinga elimaphakathi kuya kolukhuni elinezigaba ezehlayo/zomqansi. Uma ufuna ukwenza lokhu sicela uphathe izicathulo ezifanele zokuhamba.
4.83 · 241 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-241
Sitholakala ku-4km nje ukusuka ezindaweni ezidumile zama-surf e-Raglan; I-Manu Bay, i-Whale Bay kanye nezinkomba. I-Te Toto Gorge iphezulu nje ngomgwaqo. Kukhona nezindawo ezinhle zokuhamba zasehlathini emhlabeni wethu futhi naphansi komgwaqo.
Sithanda ukushiya izivakashi zethu endaweni yazo yangasese ukuze singezi sizokubona ngaphandle uma kufanele. Uma kukhona okudingayo ngesikhathi sokuhlala kwakho sicela uzizwe wamukelekile ukuza endlini yethu enkulu engaphansi komgwaqo olandelayo oseduze (emgwaqeni) kanye namamitha angaba ngu-800 phansi kulowo mgwaqo.